Ciriiriga Suuqa Bakaaraha iyo faafitaanka Coronovirus - BANDHIGA
Ciriiriga Suuqa Bakaaraha iyo faafitaanka Coronovirus
Bulshada Soomaaliyeed ayaa aad u hadalhaysa ciriiriga daran ee laga soo sheegayo Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho, ka dib markii dadkii ugu badnaa ay u dukaameysi taggeen xilligan adag.
Tani ayaa waxay la xiriirtaa dhammaadka bisha soon-qaad oo bulshada ay si weyn uga dukaameysato suuqa dalka ugu weyn ee Bakaaraha, iyagoo markaasi goobo kala duwan isaga kala imaanaya.
Marka aad milicsato ciriiriga ka jira Suuqa Bakaaraha ayaa waxaad ka garan kartaa inaanu waxba kaga duwaneyd, sidii caadiga ahayd ee ay dadka uga dukaameysan jireen sanadihii la soo dhaafay.
Midda hadalhaynta badan dhalisay ayaa ah, iyadoo xilligan uu dalka si weyn ugu faafayo cudursidaha COVID-19, ee uu keeno Coronavirus, oo dhammaadkii sanadkii hore lagu arkay Magaalada Wuhan ee dalweynaha Shiinaha iyo sida aanay weli shacabka diyaarka ugu ahayn in ay ka hortaggiisa ka qayb qaataan.
Cabdi Cali Warsame oo ka mid ah ganacsatada Suuqa Bakaaraha ayaa ka hadlay ciriiriga ka jira suuqaasi, isagoo dhanka kalana sheegay in ay dadku u dhaqmaan, sida inaanu la joogin Coronavirus.
“Sida ay dadka ugu isku dhex qaadayaan haddaad fiiriso, waxaadba is leedahay dadkaan Coronavirus lamaba jooggo, hadana Muqdisho waa meesha kiisaska ugu badan laga helay, dalka oo dhan.” Ayuu yiri ganacsadaha.
Waxa kaloo uu yiri “Tobanka dambe bisha Ramadan marka lagu jiro, gaar ahaan maalmaha ugu dambeeya aad iyo aad ayaa suuqa looga dukaameystaa, dadka qaar waxay ka yimaadaan gobolada ku dhow dhow magaalada.”
Cabdi Cali ayaa intaa raaciyay “Markasta dadka waan u sheegnaa inay kala fogaadaan, laakiin dadka diyaar uma ahan inay ku maqlaan, hawlahooda bayna ku mashquulsan yihiin.”
Marka laga soo taggo hadalka ganacsadaha ayaa waxaa jira muuqaalo laga soo qaaday suuqa weyn ee Bakaaraha, oo muujinaya dadka oo is buuranaya, misena si caadiya uga adeeganaya suuqaasi, taasoo walaac badan dadka ku dhalisay.
Haldoorka bulshada ayaa kuu sheegaya inaanay macno badan sameynayn bandowga xilliga habeenkii ka jira Caasimadda Muqdisho, haddii dadka isu buuranayan suuqyada, xilli xanuunkan uu yahay kan ugu nugul ee la’is qaadsiiyo.
Fawziya Abiikar Nuur, Wasiirka Caafimaadka Somaliya ayaa gelinkii dambe ee Khamiistii Magaalada Muqdisho ka sheegtay in xaaladaha dalka laga diiwaangeliyay ay gaarayan 1,594 xaaladood.
Waaxaha Caafimaadka ayaa ku waramaya in COVID-19 uu dalka ku sii faafi doono, illaama uu qofkasta ka qayb qaadanayo dadaalada ay tahay in xanuunkan dilaaga ahi looga hortaggo.
By : Press room Tags: Ciriiriga Suuqa Bakaaraha iyo faafitaanka Coronovirus
Golaha Ammaanka Q.M oo ka shiray xaaladaha Soomaaliya